Akanakisa Truss Manipulator Mugadziri uye Fekitori |Tongli
Iyo yakazara otomatiki truss manipulator musanganiswa wekushandisa manipulator, truss, magetsi accessories uye otomatiki control system.
Kubva pane yekurudyi-ekona X, Y, Z matatu-coordination system, iyo truss manipulator ndeye otomatiki maindasitiri midziyo yekugadzirisa chiteshi chebasa chebasa kana kufambisa workpiece.Inogona kuvandudza zvakanyanya kurongeka uye kugadzikana, kuderedza mutengo wevashandi uye kuona isina kurongwa musangano wekugadzira nekuisa iyo truss manipulator kune stacking chiteshi kumucheto kumashure kwemitsara yekugadzira.
Iyo truss manipulator inoshandisa yakasanganiswa yekugadzira tekinoroji, iyo yakakodzera kurodha uye kurodha zvemichina maturusi uye mitsara yekugadzira, workpiece turnover, workpiece kutenderera, etc. Panguva imwecheteyo, yayo yakakwirira-chaiyo clamping uye yekumisikidza chishandiso system inopa yakajairwa interface yerobhoti. otomatiki kugadzirisa, uye kudzokorora kurongeka kwechokwadi kunovimbisa kurongeka kwepamusoro, Kunyanya kushanda zvakanaka uye kuenderana kwezvigadzirwa zvebatch.
Iyo truss manipulator muchina unokwanisa kurongedza otomatiki zvinhu izvo zvinoiswa mugaba (senge katoni, bhegi rakarukwa, bhaketi, nezvimwewo) kana chinhu chakarongedzerwa uye chisina kurongedzerwa.Inotora zvinhu chimwe nechimwe mune imwe hurongwa uye inozvironga pane pallet.Mukuita izvi, zvinhu zvinogona kurongedzerwa muzvikamu zvakawanda uye kusundirwa kunze, zvichave nyore kuenda kune inotevera nhanho yekurongedza uye kutumira kudura rekuchengetedza neforklift.Iyo truss manipulator inoziva hungwaru mashandiro manejimendi, iyo inogona kuderedza zvakanyanya kuwanda kwevashandi uye kuchengetedza zvinhu zvakanaka panguva imwe chete.Iinewo mabasa anotevera: kudzivirira guruva, hunyoro-uchapupu, zuva-uchapupu, kudzivirira kupfeka panguva yekufambisa.Naizvozvo, inoshandiswa zvakanyanya mumabhizinesi mazhinji ekugadzira akadai semakemikari, chinwiwa, chikafu, doro, mapurasitiki ekurongedza otomatiki maumbirwo akasiyana ezvigadzirwa zvekurongedza semabhokisi, mabhegi, magaba, mabhokisi edoro, mabhodhoro zvichingodaro.
1. Auto zvikamu indasitiri
2. Indasitiri yezvokudya
5. Indasitiri yefodya nedoro
Otomatiki truss manipulator
X axis (m/s)
Kudzokororwa kwenzvimbo kurongeka (mm)
Yakaiswa kana yakazvimirira lubrication
Yekumhanyisa kumhanya (㎡/s)
Zvakapfuura: Multiaxial Manipulator
Zvinotevera: Wire Rope Manipulator